ကျန်းမာရေး – Myanmar Live
ကျန်းမာရေး / လူနေမှုပုံစံ
April 3, 2020 April 3, 2020 - by iampmy
စနစ်တကျသွားတိုက်ခြင်းဟာ သွားများကိုခိုင်ခံ့စေပြီး ကြာရှည်ခံစေသလို အရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေကို အားရပါးရ ကြိတ်ဝါးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စနစ်တကျသွားတိုက်နည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ Myanmar Live တင်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ …
တရုတ်ရှိ မြန်မာအကျဉ်းသား ၂ ဦး Covid-19 ကူးစက်ခံရ
March 9, 2020 March 9, 2020 - by iampmy
ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းတွင် တရုတ်ပြည် ဟူဘေးပြည်နယ်၌ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုဖြင့် အကျဉ်းချခံရသည့် မြန်မာ ၂ ဦးတွင် Covid-19 …
ခံတွင်းသန့်ရှင်းပြီး ပူလောင်ခြင်းကင်းတဲ့ “ရွန့်အရွန်” ဖြင့် ပူလောင်တဲ့ခံတွင်းဆေးရည်ကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပါ
February 29, 2020 February 29, 2020 - by iampmy
လူရည်သန့်ခြင်းဟာ မြင်သူတိုင်းသဘောကျစေမယ့် ပထမဆုံးတံတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ လူတော်တော်များများလစ်လျူရှူတတ်ကြတဲ့ လူရည်သန့်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းထဲကတစ်ခုကတော့ “ခံတွင်း” ဖြစ်ပါတယ်။ ခံတွင်းနဲ့လူရည်သန့်တာနဲ့ဘာများပတ်သက်နေလည်းဆိုပြီး မေးခွန်းထုတ်နိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကို …
January 31, 2020 January 31, 2020 - by iampmy
ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုတာ အခြားသောကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေနည်းတူ အရေး ကြီးပါတယ်။ စံချိန်မီတဲ့သွားတိုက်တံ၊ သွားပိုးစားကာကွယ်ဓာတ်ပါဝင်တဲ့သွားတိုက်ဆေး၊ နည်းစနစ် ကျတဲ့သွားတိုက်နည်း စတဲ့အကြောင်းရင်းတွေက ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးကိုအထောက်အကူပြုပါ …
December 26, 2019 December 26, 2019 - by iampmy
မနက် – ညနေသွားတိုက်ရုံနဲ့ ခံတွင်းရှင်းစေမယ်ထင်ထား ? တကယ်တမ်းတော့ သွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေဟာ သင်သိထားတာထက်ကိုများပြားပါတယ် ခံတွင်းနဲ့သွားကို သန့်ရှင်းစေတဲ့ …
သွားနဲ့ခံတွင်း ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ မေးခွန်းထုတ်ဖူးပါသလား?
November 28, 2019 November 28, 2019 - by iampmy
ထိုင်းရောက်ရွှေမြန်မာများအနေနဲ့ “ရွန့်အရွန်” (Roong Aroon) သဘာဝသွားတိုက်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရင်းနှီးနေလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ ရွန့်အရွန်သဘာဝသွားတိုက်ဆေးဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံကယောဂီသွားတိုက်ဆေးရဲ့မူလလက်ဟောင်းသွားတိုက်ဆေးတစ်လက်ဖြစ်ပြီး (အမှုန့်) သုံးရတာအရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။ …